ဦးထုပ်ကြာကြာဆောင်းရင် ထိပ်ပြောင်တတ်တယ်ဆိုတာ တကယ်လား..? by popolay.com
ဦးထုပ်ကြာကြာဆောင်းရင် ထိပ်ပြောင်တတ်တယ်ဆိုတာ တကယ်လား..?
10 Feb 2020 1,062 Views
ဦးထုပ်ကို မချွတ်တမ်း အကြာကြီးဆောင်းထားရင် ထိပ်ပြောင်တတ်တယ်၊ ဆံပင်တွေ တအားကျွတ်လိမ့်မယ်လို့ လူကြီးတွေ ပြောဆိုဆုံးမတာ ကြားဖူးပါရဲ့လား..?
လူငယ်တွေဆိုတာက လူကြီးတွေ ပြောတိုင်း ယုံတတ်ကြတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါဟလည်း တစ်နည်းအားဖြင့်တော့ ကောင်းတဲ့အချက်အတစ်ချက်လို့ ဆိုရပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူကြီးတွေပြောတဲ့ ဦးထုတ်ဆောင်းတာနဲ့ ထိပ်ပြောင်တာ ဘယ်လိုများ စပ်ဆက်မှုရှိနေလဲဆိုတာကို အကြောင်းအကျိုးတွေနဲ့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဆံပင်ကျွတ်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေထဲမှာ ဦးထုတ်ဆောင်းတာကြောင့် မဟုတ်ပဲနဲ့ ဆံပင်ကျွတ် ထိပ်ပြောင်နိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေကို ဦးစွာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းဟာ မျိုးရိုးလိုက်တတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ မိသားစုဝင်ထဲမှာ ဖခင် ဒါမှမဟုတ် မိခင် က ဆံပင်အရမ်းကျွတ်တာမျိုးရှိရင်တော့ ကိုယ့်မှာလည်း ဆံပင်ကျွတ်ပြီး ထိပ်ပြောင်းနိုင်မယ့် အခြေအနေမျိုး ကြုံရနိုင်ပါတယ်။
လူတွေဟာ အသက်အရွယ်ရလာတာနဲ့အမျှ ဆံပင် အမြစ်တွေ အားနည်းလာပြီး ဆံပင်ကျွတ်တာတွေ၊ ဆံပင်တွေကျိုးတာ ပျက်ဆီးတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
မကြာခဏဆိုသလို ဆံပင်တွေ ကျွတ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ မိမိရဲ့ စားသောက်မှုပုံစံကိုလည်း ပြန်လည် စမ်းစစ်သင့်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ပရိုတင်းဓါတ် လုံလောက်မှုမရှိရင်လည်း ဆံပင်တွေအားနည်းပြီး ကျွတ်တတ်ပါတယ်။
ဆံသားကို အားရှိစေဖို့ ဦးရေပြားကို Serum နဲ့အားဖြည့်တင်းပေးရသလို အတွင်းသားက ဆံမြစ်တွေအားရှိဖို့လည်း ပရိုတင်းဓါတ် လုံလုံလောက်လောက် စားပေးဖို့လိုအပ်တယ်။
ရောဂါတစ်ခုခုကြောင့် (အထူးသဖြင့်) ကင်ဆာရောဂါသည်တွေမှာဆိုရင် သောက်ဆေးတွေကြောင့်လည်း ဆံပင်ကျွတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ အချို့သော ရောဂါပျောက်ဆေးတွေရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေဟာ ကိုယ်ဝန်စပြီးဆောင်တဲ့အချိန်မှာ ဆံပင်ကျွတ်တတ်ပါတယ်။ မိခင်ဝမ်းထဲက သန္ဓေသားက မိခင်ထံကနေ အာဟာရတွေကို စုပ်ယူအားဖြည့်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိခင်လောင်းတွေအနေနဲ့ ပရိုတင်းနှင့် ကယ်လ်စီယမ်တို့ကို လုံလောက်စွာ စားပေးဖို့လိုအပ်တယ်။
အကယ်၍ ဒီဓါတ်တွေ လုံလောက်မှု မရှိရင် ဆံပင်ကျွတ်တာတွေ ဖြစ်ပွားနိုင်ရုံသာမက ကလေးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
နံပါတ်(၆) ဆံပင်ကို စိတ်ထင်ရာလုပ်ခြင်း
ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်တိုင်းကျ ဆံပင်တွေကို မကြာခဏ ဆေးဆိုးတာ၊ အရောင်ချွတ်တာ၊ တင်းအကြပ်စွာ စည်းနှောင်တာ၊ ထုံးတာ၊ ဓါတုဆေးတွေနဲ့ အမြဲတမ်းထိတွေ့ပြီး ပုံ သွင်းတာ၊ ဦးရေပြားနှင့်ဆံပင်ရဲ့ သန့်ရှင်းမှုကို သေချာဂရုမစိုက်တာ စတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကြောင့်လည်း ဆံပင်ကျွတ်စေနိုင်တယ်။
ဦးရေပြားထဲကို ပိုးဝင်တဲ့အကြောင်းရင်းက အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ဆံပင်တွေကို ကျွတ်စေတဲ့ အဓိကပိုးကတော့ ဦးရေပြားပေါ်မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ မှိုပိုး ကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။
ဦးထုတ်အမြဲဆောင်းထားခြင်းကြောင့် ဦးရေပြားမှိုပိုး ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အကြောင်းအချက် တစ်ခုအနေနဲ့ မှန်တယ်ဆိုပေမယ့် အဓိကကျတဲ့ အကြောင်းရင်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ဦးရေပြားမှိုပိုး ကိုဖြစ်စေတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းကိုတော့ သေချာမသိ ရသေးပေမယ့် မှိုပိုးရှိနေတဲ့လူရဲ့ သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေ (ခေါင်းဘီး၊ ဘီးကုပ်နဲ့ အခြားဦးခေါင်းအတွက် အသံပြုတဲ့ပစ္စည်း) ကို အတူတူ ဝေမျှသုံးစွဲခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အကယ်၍ ကိုယ်က ဆံပင်ကျွတ်လွယ်တဲ့လူဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ဦးထုပ်အမြဲစောင်းထားတာက ဆံပင်ကျွတ်တာကို ပိုပြီးအားပေးနေသလို ဦးရေပြားမှိုပိုး ဖြစ်လာဖို့ကိုလည်း လှုံ့ဆော်ပေးသလို ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဆံပင်ကျွတ်တာဟာ ဦးထုပ်ဆောင်းတာကြောင့် အဓိကမဟုတ်သော်လည်း ပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုမှာ ဦးထုပ်ကြာကြာ စောင်းထားခြင်းက ဦးခေါင်းကို လှောင်ပိတ်ကာ ဦးခေါင်းချွေး အဆမတန်ထွက်ပြီး ဦးရေပြား ကျန်းမာရေအတွက် မသင့်တော်သည်အပြင် ဦးရေပြားသန့်ရှင်းမှုအားနည်းပြီး ဆံပင်ပိုကျွတ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဦးထုပ်ကို လိုအပ်တဲ့အချိန်မှဆောင်းပါ (သို့မဟုတ်) ကြာကြာမစောင်းထားသင့်ပါ၊ ဦးရေပြား သန့်ရှင်းမှုကို ဂရုစိုက်ပါ၊ ဆံပင်အတိုအရှည်ပေါ် မူတည်ပြီး တစ်ရက်ခြား ဒါမှမဟုတ် နှစ်ရက်ခြား ခေါင်းလျှော်ပါ။ ခေါင်းလျှော်ပြီးပါက ဆံပင်ကို ခြောက်အောင်ပြုလုပ်ပြီးမှ အိပ်ယာဝင်ပါ။ အကယ်၍ ဆံပင်နှင့် ဦးရေပြားမှာ မူမမှန်တဲ့လက္ခဏာ တစ်ခုခု တွေ့ရပါက သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်နဲ့ ပြပေးသင့်ပါတယ်။